Varotra Apple | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Varotra Apple
Varotra Apple: fahavaratra, fararano, ririnina
Tiako ny hahita zavatra mahazatra kokoa sy mahazatra noho ny hazo poma iray ao amin'ny zaridaina, saingy tsy azo atao izany! Ary na izany aza, midika ve izany fa fantantsika betsaka momba azy ireny? Mm, mety ho olona tena mahafantatra izany, saingy tsy azo inoana fa ny ankamaroan'ny mpamaky antsika dia afaka mamaritra ny fahasamihafan'ireo hazo pòm ao amin'ny tanindrazantsika, raha tsy misy ezaka fanampiny.
Tombon-tsakafo sy tsiron-tsakafo tany Semerenko, fambolena sy fiahiana
Ny poma juicy sy poti-tsaretin'ny vary varenko dia vonona amin'ny fijinjana amin'ny faran'ny volana septambra. Tian'ny olona maro ny mankafy ny voankazo miaraka amin'ny tsirin-tsakafo mahafinaritra, na dia mbola mistery aza ny fiandohan'ny karazany. LP Simirenko, mpihaza Okrainiana, no namaritra io karazana io ary nanonona izany taorian'ny rainy.
Tombontsoa sy tsiron'ny karazana applel Shtreyfling, fambolena sy fiahiana
Sakafo amam-borona isan-karazany ny tanimbolin'i Apple ao amin'ny firenentsika. Ao amin'ny zaridainan'ny raibeko, ny toerana manan-danja indrindra dia ny karazana Shtriepel, nantsoin'ny mpifanolo-bodirindrina azy hoe Streyfling na ny lohataona matevina. Tamin'ny lohataona, ny raibe dia nanompo tamim-boninahitra tamin'ny paompy mahafatifaty marevaka miaraka amin'ny ranom-boaloboka, fery marefo. Apple Shrifel dia teratany avy amin'ny firenena Baltika.
Maniry hazo papier Orlik ao amin'ny saha izahay
Noho ny tsiro avo indrindra amin'ny voankazo sy ny toetran'ny zavamaniry Orlika Orlik dia mitarika amin'ny namany. Ankoatra izany, ireo mpamboly Okrainiana, Belarosiana ary Rosiana, any amin'ireo firenena izay mamboly be dia be dia be, manaja azy noho ny vokatra avo lenta sy ny fiantohana. Ny hazo iray matotra dia ampy hamahana fianakaviana, fa raha te hahazo vola fanampiny ianao, dia afaka mahazo mpivady bebe kokoa.
Ny toetra mampiavaka ny karazana siramamy sy ny fambolena agrotechnology
Matetika ny mpamboly dia maniry ny maniry karazana poma maromaro eo amin'ny taniny. Ary matetika ny safidy dia mianjera amin'ny karazana varimbazaha Candy, izay manome voankazo mamy sy tena mamy. Ny voankazo voalohany dia miseho eo amin'ny hazo poma amin'ny faran'ny volana jolay, raha, mazava ho azy, ny hazo dia miahy tsara. Ny fomba hanaovana izany sy ny toetoetran'ny karazany, dia hiteny amin'ity lahatsoratra ity isika.
Ahoana ny fomba famolavolana sy fitomboan'ny karazan'ny Silver Hoof ao amin'ny teti-dratsiny
Misy karazana poma maro isan-karazany: ny ririnina, ny fahavaratra, ny lohataona, ny masaka, ny mamy. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny iray amin'ireo karazana fahavaratra malaza indrindra isika - ny hazo tokana Silver Hoof, ny toetoetry ny vary, ny fitsipika momba ny fambolena sy fikarakarana ny hazo. Ny tantaran'ny pèl eo amin'ny "Silver hoof" Ny karazana hazo pòm "Silver hoof" dia nentina tamin'ny 1988 tao amin'ny tobim-panandramana experdental Sverdlovsk avy amin'ny mpaka an-keriny Kotov Leonid Andrianovich.
Fambolena hazo paoma "pork Moscow" ao amin'ny zaridainanao
Ny hazo Apipe "Pearmakerin'i Moscou" dia heverina ho iray amin'ireo karazana tranainy indrindra nokolokoloina niorina tany ambanivohitra sy tany an-tanan-jaridaina, ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny famaritana sy tsiambaratelon'ny fambolena. Io karazana karazana io dia avy amin'ny fambolena voajanahary ary tsy mitombo ara-barotra. Ny karazan-tsakafo: ny fiheverana sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ny hazo dia manana satroboninahitr'ireo sampana sy sampana tena sampana, fa ny ravin-doko.
Varavarankely amin'ny "Vasyugan" apokalypsy: ny toetra, ny fambolena agrotechnics
Ny hazo "Vasyugan" dia manondro ireo karazam-pita amin'ny karazana paoma, izay lasa malaza kokoa noho ny heriny, ny fahavokarana, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny tsy fahita firy. Ary ny "Vasyugan", ankoatra izany, dia manana fiarovan-tena mafana ihany koa. Andao hijery akaiky kokoa an'io karazana io.
Varotra Apple "Ligol": ireo toetra, tombony ary ny tsy fahampiana
Ny voankazo tahaka ny pèl dia nanomboka nihinana efa ela. Na ireo razambentsika aza dia nahafantatra ny toetra mahasoa ny voankazo. Manana vitaminina sy mineraly be dia be izy io manampy ny vatana mba handresy ny aretina isan-karazany ary hitazona izany amin'ny endrika tsara. Ary firy ny karazan-java-bary apetaka anio.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Varotra Apple